7 स्वचालित कार्यप्रवाह जसले तपाइँको मार्केटिङ खेल परिवर्तन गर्नेछ | Martech Zone
शुक्रबार, डिसेम्बर 10, 2021 बिहीबार, डिसेम्बर 9, 2021 चिन्तन जैन
मार्केटिङ कुनै पनि व्यक्तिको लागि भारी हुन सक्छ। तपाईंले आफ्नो लक्षित ग्राहकहरूको अनुसन्धान गर्नुपर्नेछ, तिनीहरूसँग विभिन्न प्लेटफर्महरूमा जडान गर्नुहोस्, आफ्ना उत्पादनहरू प्रवर्द्धन गर्नुहोस्, त्यसपछि तपाईंले बिक्री बन्द नगरेसम्म पालना गर्नुहोस्। दिनको अन्त्यमा, तपाईंले म्याराथन दौडिरहेको जस्तो महसुस गर्न सक्नुहुन्छ।
तर यो भारी हुनु पर्दैन, केवल प्रक्रियाहरू स्वचालित गर्नुहोस्।
स्वचालनले ठूला व्यवसायहरूलाई ग्राहकको माग पूरा गर्न र साना व्यवसायहरूलाई सान्दर्भिक र प्रतिस्पर्धी रहन मद्दत गर्छ। त्यसोभए, यदि तपाईंले मार्केटिङ स्वचालन अपनाउनुभएको छैन भने, अब समय हो। स्वचालन सफ्टवेयरलाई समय-उपभोग गर्ने कार्यहरूको हेरचाह गर्न दिनुहोस् ताकि तपाईं महत्त्वपूर्ण कार्यहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्नुहुन्छ।
मार्केटिङ स्वचालन भनेको के हो?
मार्केटिङ स्वचालन भनेको मार्केटिङ गतिविधिहरू स्वचालित गर्न सफ्टवेयर प्रयोग गर्नु हो। मार्केटिङमा धेरै दोहोरिने कार्यहरू स्वचालित हुन सक्छन्: सोशल मिडिया पोस्टिङ, इमेल मार्केटिङ, विज्ञापन अभियानहरू, र ड्रिप अभियानहरू पनि।
जब मार्केटिङ कार्यहरू स्वचालित हुन्छन्, मार्केटिङ विभाग कुशलतापूर्वक चल्छ र मार्केटरहरूले ग्राहकहरूलाई थप व्यक्तिगत अनुभव प्रदान गर्न सक्छन्। मार्केटिङ स्वचालनले कम ओभरहेड, उच्च उत्पादकता, र बिक्री बढ्छ। यसले तपाईंलाई कम स्रोतहरूसँग तपाईंको व्यवसाय बढाउन सक्षम बनाउँछ।
यहाँ मार्केटिङ स्वचालनमा केही महत्त्वपूर्ण तथ्याङ्कहरू छन्।
75% सबै कम्पनीहरूले मार्केटिङ स्वचालन अपनाएका छन्
480,000 वेबसाइट हाल मार्केटिङ स्वचालन प्रविधि प्रयोग
बजारहरूको 63% तिनीहरूको मार्केटिङ स्वचालन बजेट बढाउने योजना
91% मार्केटरहरूको विश्वास छ कि मार्केटिङ स्वचालनले अनलाइन मार्केटिङ अभियानहरूको सफलतालाई बढावा दिन्छ
मार्केटिङ स्वचालन लागू गर्नाले योग्य लिडहरूमा 451% वृद्धि हुन्छ-औसत
जब तपाइँ मार्केटिङ स्वचालित गर्नुहुन्छ, तपाइँ ग्राहकहरूलाई विशेष रूपमा लक्षित गर्न सक्षम हुनुहुन्छ, र तपाइँको मार्केटिङ बजेट बुद्धिमानी र कुशलतापूर्वक प्रयोग गरिन्छ। मार्केटिङ स्वचालनले प्रत्येक व्यवसायको लागि काम गर्दछ, र यहाँ केहि मार्केटिङ प्रक्रियाहरू छन् जुन कार्यप्रवाह उपकरणको साथ स्वचालित गर्न सकिन्छ।
कार्यप्रवाह १: नेतृत्व पोषण स्वचालन
अनुसन्धानका अनुसार, तपाईंले उत्पन्न गर्नुहुने ५०% लीडहरू योग्य छन्, तिनीहरू अझै केही पनि किन्न तयार छैनन्। तिनीहरू खुसी हुन सक्छन् तपाईंले तिनीहरूको पीडा बिन्दुहरू पहिचान गर्न सक्नुहुन्छ र थप जानकारी प्राप्त गर्न खुला हुन सक्नुहुन्छ। तर तिनीहरू तपाईंबाट किन्न तयार छैनन्। वास्तवमा, केवल 50% लीडहरू कुनै पनि समयमा तपाईंको उत्पादनहरू किन्न तयार छन्, र त्यो आशावादी छ।
हुनसक्छ तपाईंले अनलाइन अप्ट-इन फारमहरू, बिक्री सम्भावनाहरू, वा तपाईंको बिक्री टोलीले ट्रेड शोमा व्यापार कार्डहरू प्राप्त गर्नुभयो। लीडहरू उत्पन्न गर्ने थुप्रै तरिकाहरू छन्, तर यहाँ कुरा छ: मानिसहरूले तपाईंलाई आफ्नो जानकारी दिएकाले तिनीहरू तपाईंलाई आफ्नो पैसा दिन इच्छुक छन् भन्ने होइन।
के नेतृत्व चाहिन्छ जानकारी हो। तिनीहरू तयार हुनु अघि तिनीहरूले तपाईंलाई आफ्नो पैसा दिन चाहँदैनन्। त्यसोभए, तपाईंले गर्नु पर्ने अन्तिम कुरा उनीहरूलाई भन्नु हो, "हे हाम्रो कम्पनीको उत्कृष्ट उत्पादनहरू छन्, तपाईं किन केही किन्नु हुन्न!"
स्वचालित नेतृत्व पोषणले तपाईंलाई क्रेताको यात्राको माध्यमबाट उनीहरूको आफ्नै गतिमा नेतृत्वहरू सार्न अनुमति दिन्छ। तपाईं तिनीहरूसँग अन्तरक्रिया गर्नुहोस्, तिनीहरूको विश्वास प्राप्त गर्नुहोस्, तपाईंको उत्पादनहरू बजार गर्नुहोस्, र त्यसपछि बिक्री बन्द गर्नुहोस्। स्वचालनले तपाईंलाई श्रम-गहन मार्केटिङ प्रयासहरू बिना सम्भावनाहरू र नेतृत्वहरूसँग सम्बन्धहरू विकास र कायम राख्न मद्दत गर्दछ। तपाइँ संभावनाहरु र ग्राहकहरु संग उनीहरुको खरीद यात्रा को हरेक चरण मा अन्तरक्रिया।
कार्यप्रवाह २: इमेल मार्केटिङ स्वचालन
इमेल मार्केटिङले मार्केटरहरूलाई सम्भावनाहरू, नेतृत्वहरू, अवस्थित ग्राहकहरू र विगतका ग्राहकहरूसँग सम्बन्ध बनाउन मद्दत गर्दछ। यसले तपाइँलाई उनीहरूका लागि सहज भएको समयमा उनीहरूसँग प्रत्यक्ष कुरा गर्ने अवसर सिर्जना गर्दछ।
इमेल प्रयोगकर्ताहरूको संख्या पुग्न अनुमान गरिएको छ २०२4.6 सम्ममा billion 2025 अर्ब। धेरै इमेल प्रयोगकर्ताहरूसँग, ईमेल मार्केटिङबाट लगानीमा फिर्ता किन ठूलो छ भनेर हेर्न सजिलो छ। अध्ययनहरूले देखाएको छ कि इमेल मार्केटिङमा खर्च गरिएको प्रत्येक $ 1 को लागि, औसत फिर्ती $ 42 हो।
तर इमेल मार्केटिङले समयको बर्बादी जस्तो महसुस गर्न सक्छ किनभने त्यहाँ गर्न धेरै छ: सम्भावनाहरू खोज्नुहोस्, तिनीहरूसँग संलग्न हुनुहोस्, आफ्ना उत्पादनहरू बजार गर्नुहोस्, इमेलहरू पठाउनुहोस्, र फलोअप गर्नुहोस्। स्वचालनले ग्राहक सम्बन्ध व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित दोहोरिने कार्यहरूलाई स्वचालित गरेर, इमेल मार्केटिङलाई प्रभावकारी बनाएर मद्दत गर्न सक्छ।
इमेल मार्केटिङ स्वचालन उपकरणले सदस्यहरूलाई सान्दर्भिक, व्यक्तिगत, र समयमै सन्देशहरू पठाउन सक्छ। यसले पृष्ठभूमिमा काम गर्छ, तपाईंलाई अन्य बहुमूल्य कार्यहरूमा काम गर्न दिन्छ। तपाईले प्रत्येक व्यक्तिलाई व्यक्तिगत इमेलहरू पठाउन सक्नुहुन्छ, नयाँ आगन्तुकहरू देखि दोहोर्याउने खरिदहरू सम्म।
कार्यप्रवाह 3: सामाजिक मीडिया मार्केटिंग स्वचालन
त्यहाँ विश्वभर 3.78 बिलियन सोशल मिडिया प्रयोगकर्ताहरू छन्, र तिनीहरूमध्ये धेरैले सोशल मिडियामा हरेक दिन 25 मिनेटदेखि2घण्टा खर्च गर्छन्। यसैले धेरै मार्केटरहरूले आफ्नो कम्पनीहरू मार्केट गर्न सोशल मिडिया प्रयोग गर्छन्।
जब तपाइँ सोशल मिडियामा ग्राहकहरु र सम्भावनाहरु संग अन्तरक्रिया गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईले उनीहरुसँग वास्तविक समयमा कुरा गर्न र उनीहरुको प्रतिक्रिया प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। लगभग आधा अमेरिकी ग्राहकहरूले उत्पादन र सेवाहरूको बारेमा सोधपुछ गर्न सोशल मिडिया प्रयोग गर्छन्, त्यसैले बलियो सोशल मिडिया उपस्थिति अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ।
तर सामाजिक सञ्जालमा पूरै दिन बिताउन सम्भव छैन, र त्यहीँ स्वचालन आउँछ। तपाईंले समय तालिका, रिपोर्ट, र विचारहरू सङ्कलन गर्न सोशल मिडिया मार्केटिङ उपकरण प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। केहि स्वचालन उपकरणहरूले सामाजिक मिडिया पोष्टहरू पनि लेख्न सक्छन्।
सोशल मिडिया मार्केटिङ स्वचालनले तपाइँको समय खाली गर्दछ, तपाइँलाई तपाइँका अनुयायीहरूसँग संलग्न हुन र प्रामाणिक कुराकानीहरू राख्न सक्षम बनाउँछ। तपाईले के पोस्ट गर्ने र कहिले पोस्ट गर्ने भन्ने बारे रणनीति बनाउन उत्पन्न रिपोर्टहरू पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
कार्यप्रवाह 4: SEM र SEO व्यवस्थापन
तपाईंसँग शायद दशौं वा सयौं प्रतिस्पर्धीहरू छन्, र त्यसैले खोज इन्जिनहरूमा विज्ञापन गर्न यो महत्त्वपूर्ण छ। SEM (खोज इन्जिन मार्केटिङ) ले बढ्दो प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा तपाईंको व्यवसाय बढाउन सक्छ।
SEO (खोज इन्जिन अप्टिमाइजेसन) भनेको खोज इन्जिनहरूमा सान्दर्भिक खोजहरूको लागि आफ्नो वेबसाइटको दृश्यता बढाउनको लागि सुधार गर्नु हो। खोज परिणामहरूमा तपाईंको साइट जति बढी देखिने छ, सम्भावित र अवस्थित ग्राहकहरूलाई तपाईंको व्यवसायमा आकर्षित गर्ने तपाईंको सम्भावनाहरू उच्च छन्। SEM ले लक्षित कुञ्जी शब्द खोजहरूमा क्यापिटलाइज गर्छ, जबकि SEO ले SEM रणनीतिहरूद्वारा उत्पन्न लिडहरूलाई रूपान्तरण र कायम राख्न मद्दत गर्दछ।
जब तपाइँ SEM र SEO स्वचालित गर्नुहुन्छ, तपाइँ म्यानुअल कार्यको मात्रा घटाउनुहुन्छ र कठिन कार्यहरूलाई गति दिनुहुन्छ। जब तपाइँ प्रत्येक SEM र SEO प्रक्रियालाई स्वचालित गर्न सक्नुहुन्न, त्यहाँ केहि कार्यहरू छन् जुन तपाइँ दक्षता बढाउन मद्दत गर्न स्वचालित गर्न सक्नुहुन्छ।
SEM र SEO प्रक्रियाहरू जुन स्वचालित गर्न सकिन्छ वेब एनालिटिक्स उत्पन्न गर्ने, ब्रान्ड उल्लेख र नयाँ लिङ्कहरू निगरानी गर्ने, सामग्री रणनीति योजना, लग फाइलहरू विश्लेषण, कीवर्ड रणनीति, र लिङ्क निर्माण समावेश गर्दछ। जब SEM र SEO सावधानीपूर्वक एकअर्कासँग जोडिएका हुन्छन्, तिनीहरूले उल्लेखनीय परिणामहरूको साथ बलियो डिजिटल मार्केटिङ अभियान उत्पादन गर्छन्।
कार्यप्रवाह ५: सामग्री मार्केटिङ कार्यप्रवाह
प्रत्येक महान ब्रान्डसँग एउटा चीज हुन्छ जसले यसलाई अगाडि बढाउँछ: बहुमूल्य र सान्दर्भिक सामग्रीको सम्पत्ति जसले यसलाई आफ्ना दर्शकहरूसँग जोड्छ। सफल डिजिटल मार्केटिङ अभियानहरूमा सामग्री मार्केटिङले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।
तर यहाँ कुरा छ। केवल 54% B2B मार्केटरहरूले आफ्ना अवस्थित ग्राहकहरूसँग वफादारी निर्माण गर्न सामग्री प्रयोग गर्छन्। बाँकी नयाँ व्यापार जित्ने प्रयास गर्नुहोस्। हामीलाई गलत नठान्नुहोस्, नयाँ व्यवसाय जित्नु नराम्रो होइन, तर अनुसन्धानले देखाउँछ कि 71% खरीददारहरू बिक्री पिच जस्तो देखिने सामग्रीद्वारा बन्द गरिएका छन्। त्यसोभए, सम्भावनाहरू र अवस्थित ग्राहकहरूलाई बेच्न धेरै समय खर्च गर्नुको सट्टा, तपाईंले के गरिरहनु पर्छ तिनीहरूसँग संलग्न हुनु हो।
सामग्री मार्केटिङ स्वचालन उपकरणले दोहोरिने सामग्री मार्केटिङ कार्यहरूलाई स्वचालित र स्ट्रिमलाइन गर्न सक्छ। यसले तपाईंको सामग्री मार्केटिङ रणनीतिको प्रभावकारिता सुधार गर्न मद्दत गर्छ। तपाइँ सजिलै संग सामग्री मा नवीनतम प्रवृति को पहिचान र विचार उत्पादन को लागी उपकरण को उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
राम्रो सामग्री मार्केटिङ रणनीतिको साथ, तपाईंले आफ्ना दर्शकहरूसँग विश्वास निर्माण गर्नुहुन्छ, सम्भावनाहरू र ग्राहकहरूसँग जडान गर्नुहुन्छ, नेतृत्वहरू उत्पन्न गर्नुहुन्छ, र रूपान्तरणहरू सुधार गर्नुहुन्छ। सामग्री स्थिरताले तपाइँको कम्पनीलाई थप विश्वसनीय हुन मद्दत गर्दछ, ग्राहकहरु संग विश्वास निर्माण गर्दछ, र तपाइँको व्यापार प्रतिष्ठा बलियो बनाउँछ।
कार्यप्रवाह 6: मार्केटिङ अभियान व्यवस्थापन
यदि तपाईंको कम्पनीले कम लीडहरू प्राप्त गरिरहेको छ र बिक्री तल गएको छ भने, मार्केटिङ अभियानले अचम्मको काम गर्न सक्छ। राम्रो मार्केटिङ अभियानले तपाईंको व्यवसायमा नयाँ चासो जगाउन र बिक्री बढाउन सक्छ। यद्यपि, सफल अभियानमा मापनयोग्य नतिजाहरू हुनैपर्छ-जस्तै बढ्दो बिक्री वा थप व्यापार सोधपुछ।
मार्केटिङ अभियान व्यवस्थापनले अनुकूल व्यापार परिणामहरू प्रदान गर्ने उद्देश्यले सावधानीपूर्वक योजना र कार्यान्वयन गतिविधिहरू समावेश गर्दछ। यसले सुनिश्चित गर्दछ कि अभियानले कम्पनीका लक्ष्यहरूलाई ग्राहकहरूको आवश्यकतासँग सम्बन्धित कार्ययोग्य लक्ष्यहरूमा रूपान्तरण गर्दछ।
मार्केटिङ अभियान व्यवस्थापन स्वचालनले मार्केटरको कामलाई सजिलो बनाउँछ। उदाहरणका लागि, एक मार्केटरले नेतृत्व प्रवाह स्वचालित गर्न सक्छ। जब सम्भाव्यताले फारम पूरा गर्छ, मार्केटिङ प्रयासहरूको एक क्रम सुरु हुन्छ। इमेलहरू विज्ञापनहरू प्रवर्द्धन गर्न, व्यवसायको लागि अनुरोध गर्न वा बिक्री माग गर्न स्वचालित रूपमा पठाउन सकिन्छ।
कार्यप्रवाह 7: कार्यक्रम योजना र मार्केटिंग
मार्केटिङ घटनाले उत्पादन वा सेवालाई सीधै सम्भावना र अवस्थित ग्राहकहरूमा लैजान्छ। यसले घटना अघि, समयमा र पछि ब्रान्डको दृश्यता बढाउन मद्दत गर्न सक्छ। एक घटनाले कम्पनीलाई नेतृत्व र नयाँ अवसरहरू उत्पन्न गर्न मद्दत गर्न सक्छ। मार्केटरहरूले समग्र ग्राहक सन्तुष्टि, संलग्नता, र अवधारण बढाउनको लागि एक विशेष उत्पादन वा सुविधालाई बढावा दिन सक्छन्।
तर हरेक सफल मार्केटिङ घटना राम्रोसँग योजनाबद्ध र योजनाबद्ध हुनुपर्छ। कार्यप्रवाह उपकरणले मार्केटरहरूलाई सम्पूर्ण प्रक्रिया स्वचालित गर्न अनुमति दिन सक्छ - दर्ता, घटना पदोन्नति, प्रतिक्रिया सम्म।
जब तपाइँ घटनाहरूलाई मार्केटिङ माध्यमको रूपमा प्रयोग गर्नुहुन्छ, तपाइँ सम्भावित ग्राहकहरूलाई कम्पनीसँग पहिलो-हात अन्तरक्रिया प्रस्ताव गर्नुहुन्छ र उनीहरूलाई यसको व्यक्तित्व, फोकस, र परिप्रेक्ष्य जान्न मद्दत गर्नुहुन्छ।
मार्केटिङ स्वचालनको ठूलो प्रभाव छ
विश्वव्यापी बजारमा, तपाईंको व्यवसायको लागि भीडबाट अलग हुनु महत्त्वपूर्ण छ। मार्केटिङ स्वचालन प्रयोगकर्ताहरूको 80% नेतृत्व प्राप्तिमा भएको वृद्धिको रिपोर्ट गर्नुहोस्, र धेरै व्यवसायहरूले आफ्नो मार्केटिङ प्रयासहरूलाई अझ प्रभावकारी बनाउन प्रविधिको प्रयोग गरिरहेका छन्। स्वचालनले तपाइँको मार्केटिङ अभियानको हरेक पक्षलाई व्यवस्थित गर्न मद्दत गर्न सक्छ - सुरु देखि समाप्त सम्म, सम्पूर्ण प्रक्रियालाई सहज र झन्झट-मुक्त बनाउँदै।
टैग: स्वचालनईमेल विपणन स्वचालनघटना योजना स्वचालननेतृत्व पोषण स्वचालनमार्केटिंग स्वचालनमार्केटिङ स्वचालन तथ्याङ्कमार्केटिङ स्वचालन तथ्याङ्कमार्केटिङ अभियान स्वचालनमार्केटिंग कार्यप्रवाहppc व्यवस्थापनखोज इन्जिन मार्केटिङ स्वचालनखोज इन्जिन अनुकूलन स्वचालनखोज इन्जिन अनुकूलन व्यवस्थापनखोज मार्केटिङ व्यवस्थापनSemएसईओसामाजिक मिडिया मार्केटिङ स्वचालनतथ्याङ्कविपणन स्वचालन के हो
चिन्तन जैन प्रोडक्ट मार्केटिङका ​​एसोसिएट डाइरेक्टर हुन् Kissflow कार्यप्रवाह, एक एकीकृत प्लेटफर्म जसले संगठनहरूलाई सबै प्रकारका कामहरू एकै ठाउँमा व्यवस्थापन गर्न सक्षम बनाउँछ। चिन्तन एक कुशल मार्केटिङ व्यवसायी हो जसले कार्यस्थलको प्रविधि, कार्य व्यवस्थापन, र डिजिटल कार्यस्थल जस्ता विषयहरूमा व्यापक रूपमा लेख्छन्। उहाँले विभिन्न व्यापार र प्रविधि प्लेटफर्महरूमा सक्रिय रूपमा योगदान दिनुहुन्छ।
रिवाइन्ड: कसरी स्वचालित रूपमा तपाईंको Shopify वा Shopify प्लस स्टोर ब्याकअप गर्ने